मासु मात्र प्रोटिनको एक मात्र स्रोत हो भन्ने सोच्नुहुन्छ तर याे कुरा गलत हो । मासुबाहेक पनि यस्ता खानेकुरा छन् जो प्रोटिनका सर्वश्रेष्ठ स्रोत हुन् त्यसैले शाकाहारीले खानै पर्ने खानेकुराहरू जानिराखाै - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it हामी दैनिक प्याज त खाइरहेका हुन्छाै तर किन खाने प्याज ? के पाइन्छ यसमा ? के के छन् त फइदा जानिराखाै
Up Next मिलेका दाँत भएरमात्र मुख स्वास्थ्य राम्रो छ भन्न सकिँदैन । त्यसका लागि दाँतसँगै सास गन्हाउने समस्या हुनु हुँदैन । सास गन्हाउने समस्या छ भने एसो गर्नुहोस्